Pamusoro Kupedza - Pandawill Technology Co, Ltd.
Kuti tibudirire kuita kwakanyanya kwazvo kwegungano, tinofanirwa kuenzanisa kupedzisa kwakakodzera kwazvo kune kwako kunyorera uye gungano maitiro.
Kuti tigutsikane kusanganiswa kwega kwega gungano, kushandiswa kwezvinhu uye chinodikanwa chekushandisa, isu tinopa inotevera yakazara yakazara renji inotengeswa seyemukati meimba maitiro:
✓Tsika yakatungamirwa HASL
✓Kunyudza Goridhe pamusoro peNickel (ENIG), inosanganisira Goridhe rakaomarara
✓OSP (Organic Solderability Kuchengetedza)
✓Chigunwe Chigoridhe, Carbon Dhinda, Inotsemuka S / M.
✓Flash Goridhe (Yakaomarara Goridhe yakanamirwa pamifananidzo)
✓Solder mask: girini, bhuruu, tsvuku, nhema, yero, chena zviripo
✓Silk skrini: chena, bhuruu, tsvuku, yero, nhema, girini zviripo
Isu tinofara kukuyambira iwe pamhedzisiro inokodzera zvichienderana nezvinhu zvinoverengeka zvinosanganisira pasherufu hupenyu, kutarisisa, nzvimbo yepamusoro, kuungana kwemahwindo akavhurika pakati pezvirongwa uye pachena mutengo.
Mabhodhi ese anopihwa anosanganisira yakazara mushumo mhando iyo inotsanangura kuisirwa yakatemwa yemapuranga pamwe nechikamu chemuchinjikwa kana zvichidikanwa izvo zvinoratidzira yemukati yakaturikidzana yakadzika yakadzika yeiyo kuburikidza negomba yakanamirwa uye yekurapa kwepamusoro.
Pandawill zvakare inopa yakawanda yakasarudzika solder mask mavara uye anopedzisa (gloss kana matte) kuti akwane ako dhizaini zvinodiwa. Ipo ruzhinji rwePCBs rwakagadzirwa muindasitiri yakasvibirira, isu tinopawo yakatsvuka, bhuruu, yero, yakajeka uye inopenya chena uye dema inopesana iyo inoshandiswa zvakanyanya mukugadzira kweUSE yakavakirwa mwenje kunyorera kuti iratidze kana kudzvinyirira mhedzisiro yechiedza. Ose mavara ari pamusoro anopiwa pasina mutengo wepayimusi uye inki dzinoshandiswa dzakaverengerwa kupa iwo akakwirisa emazinga ekutsanya kwemavara uye kuramba kupera uye / kana kupunduka kana kugadziriswa.